साताको तस्वीर : बुर्तिवाङमा तीज ! – ebaglung.com
साताको तस्वीर : बुर्तिवाङमा तीज !
२०७४ भाद्र ९, शुक्रबार २३:५०	Full Slider, Top News, अन्य समाचार, विचित्र
झरना कँडेल, बुर्तिवाङ २०७४ भदौ ९ । भाद्र शुक्ल द्वीतिया देखि पञ्चमी सम्म ४ दिन सम्म मनाईने हिन्दु नारीहरुको महान पर्व हरितालिका तीजको रौनक लगभग सकियो । माईतीबाट बाबुआमा दाजु भाई गएर विवाह गरेर गएका छोरी दिदी वहिनीलाई घरमा ल्याएर मीठो मीठो परिकार दर खुवाएर उनिहरुका दुख र पीडाका वेदना सुन्ने पर्व पनि हो तीज ।
परम्परागत मनाउदै आएको तीज पर्वमा आधुनिकताको प्रवेशले निकै परिवर्तन ल्याएको छ । माईत आएर छोरी, दिदीवहिनीहरुले घरमा व्यहोरेका पीडा र वेदना गीतको माध्यमबाट सुनाउने सुन्ने प्रचलन हराउदै गएको छ । पछिल्लो समय तीज रमाईलो पर्वको रुपमा परिवर्तित हुँदैछ । उत्ताउलो चटक भटक देखाउने प्रवृत्तिको विकास भएको छ ।
बागलुङ जिल्लाको पश्चिम बुर्तिवाङ बजारमा बर्षेनि तीजका दिने महिलाहरु एकत्रित भएर सामुहिकरुपमा नाँचगान गरेर तीजलाई हर्षोल्लासमय बातावरणमा मनाउदै आएका छन् । यसपालीको तीज पर्वपनि यसै गरी महिलाहरु जम्मा भएर तीज मनाएका छन् ।
तीजको महानपर्वका दिन बुर्तिवाङ बजारमा उर्लिएको जनसागरको सबभन्दा राम्रो पक्ष भनेको, न यहाँ कुनै राजनीतिक गन्ध हुन्छ, न कुनै जातिय भेदभाव, न यहाँ कुनै प्रतिष्पर्धा हुन्छ, न कुनै दाउपेच । स्वत:स्फूर्त रुपमा जम्मा भएर तीज पर्वलाई यसरी सद्भावपूर्ण तवरले सम्पन्न गर्नु यस क्षत्रका जनता खासगरी महिलाहरुको महानता हो । र, यस्लाई आगामी वर्षहरुमा पनि यसैगरी जीवन्त राख्नु पर्दछ ।
हेरौँ केहि तस्वीरहरु-
यसैवीच मुलुकको राजधानी काठमाडौँको बसन्तपुर (हनुमान ढोका)मा तीजका दिन महिलाहरुले तीज उत्सव भव्यरुपमा मनाए्का छन् । सहकर्मी बिमल खड्काले राजधानीबाट पठाएका तीज पर्वका तस्वीरहरु-
गुल्मी तम्घास देखि वलेटक्सार सम्म तीजको रौनक (तस्वीर)
अर्नाकोटलाई बिकास सँगै पर्यटकीय स्थल बनाउन सबै लाग्नु पर्नेमा नेका क्षत्रीय सभापति कुँवरको जोड